Baarlamaanka oo maanta dhagaysanaya hindise sharciyeedka leylitirka iyo deeqaha siyaasiyiinta | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Baarlamaanka oo maanta dhagaysanaya hindise sharciyeedka leylitirka iyo deeqaha siyaasiyiinta
Baarlamaanka oo maanta dhagaysanaya hindise sharciyeedka leylitirka iyo deeqaha siyaasiyiinta
Mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta kulan ku yeelanaya xarunta golaha shacabka ayaa dhageysanaya akhrinta koowaad ee Hindise sharciyeed ku saabsan xuquuqda leylitirka iyo deeqaha ay leeyihiin siyaasiyiinta dalka.
Maxamed Cumar Maxamuud oo ah habdhowraha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in Guddiga xeer hoosaadka ee Barlamaanka ay ku mashquulsanaayeen soo diyaarinta hindise sharciyeed ku saabsan xuquuqda leylitirka iyo deeqaha ay leeyihiin siyaasiyiinta, kaasi oo uu tilmaamay in uu mari doono akhrinta koowaad.
Xildhibaanka ayaa sheegay in sharcigan uu ahmiyad u leeyahay dalka maadaama ay gabogabo tahay waqtiga hay’adaha dowladda, iyadoo haddii ay dhacdo in xubnaha labada gole marka ay doorasho dhacdo qofka aan ku soo biirin ee aan dib ugu soo laaban masraxa siyaadda in il gaar ah lagu eego xuquuqda uu yeelanayo.
Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud ayaa xusay in Guddiga gaadiidka ee baarlamaanka ay warbxin u gudbin doonaan golaha shacabka.
Previous PostDowlada Kenya oo sheegtay in mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed ay ku taageertay Alshabaab weerarkii Ceel Cadde Next PostMadaxweyne Xasan oo dalka dib ugu soo laabtay kadib shirkii Urdun (Sawiro)